Madaxweyne Trump oo ka hadlay xiriirka kala dhexeeya Japan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Trump oo ka hadlay xiriirka kala dhexeeya Japan
Madaxweyne Trump oo ka hadlay xiriirka kala dhexeeya Japan
Donald Jey Trump Madaxwaynaha Mareykanka ayaa gaaray dalka Japan lugtiisii ugu horeysay ee booqashada uu ku marayo dalalka Qaaradda Assia hlkaasi oo uu kula kulkmayo madaxda wadamadaa uu tagayo.
Mr Trump oo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Japan kula hadlayay saldhiga Yokota oo u dhaw magaaladda Tokyo ee Caasimadda Dalka Jabaan ayaa ammaanay isbahaysiga u dhaxeeya Mareykanka iyo Japan oo uu sheegay in uu yahay mid wanaagsan.
Madaxwaynaha Mareykanka ayaa intaa ku daray in militariga ay haystaan dhaqaalihii loo baahnaa si ay nabadda u ilaaliyaan islamarkana ay xorriyadda u difaacaan.
Booqashada madaxwayne Trump ayaa ku soo beegmaysa xilli ay kacsan tahay xiisadda barnaamijka Niyukleerka iyo tijaabada gantaaladda Kuuriyada Waqooyi,welina majiraan wax war ah oo uu ka yiri arrintaasi Kuuriyada Waqooyi.
Labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa horey waxa ay isu waydaarsadeen hanjabaado iyo hadalo kulul kuwaasi oosaxaafadda adduunku ay isku marinayeen.
Waxaa ay noqon doontaa booqashadii ugu dheereyd ee uu madaxwayne Mareykan ah ku tago dibadda muddo 25 sano ah.
Madaxwyen Trump ayaa Booqashadiisa oo qaadan doonta 11 maalmood waxa uu ku tagi doonaa dalalka Japan, Kuuriyada Koonfureed, Shiinaha, Vietnam iyo Philippine,isagoo xoojinaya xiriirka kaladuwan ee ka dhexeeya wadamadaasi.
Previous articleIraan oo iska fogeysay iney wax lug ah ku leedahay is casilaadii Sacad Al-Xariiri
Next articleMadaxweyne Trump oo ka hadlay xiriirka kala dhexeeya Japan